हामिले समर्थन गरेको टिमले हर हालतमा राम्रो खेल्नै पर्ने हुन्छ । किन ?| Nepal Pati
फुटबलका तिन प्रकारका दर्शकहरु हुन्छन । आम दर्शक¸ समिक्षक र खेल विशेषज्ञ(पंडित) । खेल पंडितहरुले अनुमान लगाउछन¸ खेलाडी कस्तो हालतमा छ ? उसकाे पहिलाको र अहिलेको प्रदर्शनमा कस्तो फरक आएको छ ? मैदानमा गोल गर्न नसके पनि फुटबलरले कतिको बल होल्ड गरेको छ । पासहरु कतिको निकालेको छ र खेलमा उस्को योगदान कतिको छ भनेर विस्तृत रुपमा ब्याख्या गर्दछन ।
समिक्षकहरुले तत्कालको उस्को खेल र उसको प्रदर्शनको बारेमा टिप्पणिहरु गर्दछन । यी दुई प्रकारका दर्शकहरु ब्यबसायिक हुन् । यसो यसो गर्न यीनीहरुलाई जिम्मेवारी दिईएको हुन्छ । तर फुटबलका असली दर्शक भनेका आम दर्शक हुन । जो रंगशालामा जान नपाएपनि टेलिभिजन वा रेडियोमै भएपनि प्रत्यक्ष प्रशारण सुनेर फुटबलको मजा लिने गर्दछन । आम दर्शकलाई खेलाडीको जिवनि¸हिजोको प्रदर्शनि वा अस्वस्थता संग कुनै सरोकार हुदैन । बस उनीहरुले मन पराएको खेलाडीले मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नै पर्दछ । मन परेको खेलाडी ले गोल हान्दिए र राम्रो बचाउ गरिदिए यी आम दर्शक अत्यन्तै खुशि हुन्छन् । अहिलेको विश्वकप फुटबलमा मुख्यतया तिन जना खेलाडीमाथी विश्वका खेलप्रेमीहरुको ध्यान परेको छ ।
नेईमार¸मेस्सी र रोनाल्डो । आम दर्शक उनीहरुको उत्कृष्ट प्रदर्शन हेर्न लालायित छन् । आम दर्शकको नजरमा रोनाल्डोको प्रदर्शन उत्कृष्ट ठहरीसक्यो¸किन कि उनले ह्याट्रिक गरे । जसमा पेनाल्टी र फ्रिकिकको पनि सहि सदुपयोग गरे । मेस्सीको प्रदर्शन आम दर्शकको नजरमा गय गुज्रेको ठहरीयो किन कि आम दर्शकले उनको खेल भन्दा पनि पेनाल्टि मिस गरेकोमा आक्रोश ब्यक्त गरे । नेईमारको प्रदर्शनमा पनि आम दर्शक उत्साहित हुन सकेनन किन कि जुन अपेच्छा दर्शकले उनीमाथी गरेका थिए त्यो अनुसार उनी न फ्रेममा देखिए न त उन्ले गोल नै गर्न सके । उनी राम्रो संग फिट नभएको कुरामा दर्शकलाई चासो रहेन । उनी रोनाल्डो जस्तो बन्न सकेनन मेस्सी जस्तै गय गुज्रेको ठहरिए ।
हामि आम दर्शक हौं¸म पनि आम दर्शक हुँ । म ब्राजिलियन टिमको समर्थन गर्ने आम दर्शक हो । मलाई पनि विपक्षी टिमसँग¸ ब्राजिलियन टिमको खेलाडीको फिटनेस संग कुनै मतलव छैन । मलाई हर हालतमा ब्राजिलको उच्च प्रदर्शन हेर्नु छ । हालसम्मको सबै संस्करणको एकमात्र सहभागी टिम । पाँच पटकको च्याम्पियन भएको नाताले खेलमा हार वा बराबरी पश्चात कुनै तर्क पेश गरेको मन पर्दैन मलाई । स्विटजरल्याण्डसंगको खेलमा प्रष्ट देखियो कि नेईमार अझै फिट भईसकेका छैनन र अरु खेलाडीले पनि सोचे अनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । लाखौंको संख्यामा पेशेबार खेलाडी भएको देशमा उनीहरु भन्दा अझ धेरै क्षमता भएका खेलाडी हुन सक्छन । छान्न सक्नु पर्यो नि ।
मेरो नजरमा ब्राजिलले स्विटजरल्याण्ड संग हारेको हो बराबरी खेलेको हैन । हामी आम दर्शकले चार बर्ष कुरेका छौ¸आफ्नो टिमको उच्च प्रदर्शन र च्याम्पियन बनेको हेर्न तर हिजोको खेलशैली हेर्ने हो भने ब्राजिललाई समुह चरण पार गर्न पनि मुश्किल छ । खेलमा उच्च रणनिति बनाएर अवसरहरु श्रृजना गर्दै विपक्षीको पोष्टमा बल छिराउन सक्नु पर्दछ तब मात्र च्याम्पियन बन्न सकिन्छ । अबको बाँकि दुईवटा खेलमा ब्राजिलले आफ्नो खेल नसुधार्ने हो भने पुनः हामी एकपटक निराश हुनपर्ने देखिन्छ तर हामिले आम दर्शक बाट अलि फराकिलो भएर हेर्ने हो भने स्टार खेलाडीहरु सधै विपक्षीको निशानामा पर्ने गर्दछन । च्याम्पियन लिगको फाईनलमा सर्जियो रामोशको ट्याकलमा पर्दा मोहम्मद सलाह ले विश्वकपको खेल बेन्चमा बसेर हेर्नु पर्यो ।
अन्तिम समयमा ईजिप्टले गोल खादा सलाह कति निराश बनेका थिए । आइतबार राति आफ्नो पहिलो खेल खेल्दा ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेईमार पुरै समय विपक्षी खेलाडीको निशानामा परेका थिए । स्वीट्जरल्याण्डले उपाधिको दावेदार मानिएको ब्राजिललाई १–१ गोलको बराबरी रोकेको थियो । यो खेलका क्रममा ब्राजिलियन स्ट्राईकर नेइमार धेरै पटक स्वीस खेलाडीको चरम निशानामा परे । यस अघिको खेलमा रोनाल्डो र मेस्सि पनि निशानामा परेका थिए तर पूरै ९० मिनेट खेलेका नेईमारलाई १० पटक फाउल गरिएको थियो ।
यो विश्वकप फुटबल २०१८ को कुनै एक खेलमा एक खेलाडीमाथि भएको फाउल पहिलो रेकर्ड हो । यसअघि १९९८ मा इंग्ल्याण्डका एलन सिएरर माथि ११ पटक फाउल गरिएको थियो । चोटका कारण पेरिस सेन्ट जर्मिनको सिजनका अन्तिम खेलहरुमा बेन्चमा बस्न बाध्य भएका नेइमार अझै पूर्ण फिट भइसकेका छैनन् र यो कुरा हिजोको म्याचमा प्रष्ट संग देख्न सकिन्थ्यो । ब्राजिल टोलिका भरपर्दा नेईमार लगातार विपक्षी खेलाडीको ट्याकलमा पर्दा ब्रजिलको प्रदर्शन प्रभावित भएको छ र आगामी खेलमा पनि यो शिलसिला दोहोरिन सक्नेछ ।
२०१४ को विश्वकपमा उनी कोलम्वियाका खेलाडीको कारण चोटग्रस्त भएर मैदान बाहिर हुदा जर्मनी संग ब्राजिलले लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो भने तेश्रो स्थान पनि गुमाएको थियो । पुन तर भन्न चाहे¸ किन कि आम दर्शकललाई यो कुराको कुनै मतलव नै हुदैन । बस आफुले मन पराएको स्ट्राईकरले धमाधम गोल हान्न पर्यो । हेरौ खेल अझै बाकि नै छ । पहिलो खेलबाट नै निराश हुनपर्ने पनि छैन । एउटा गेममा गोल नगर्दा वा मौका मिस गर्दैमा नेईमार र मेस्सिलाई खराब खेलाडी मान्न मिल्दैन । आगामी खेलको लागी हार्दिक शुभ कामना…. ।
लेखक : मनोरन्जन मल्ल ठकुरी फुटबललाई माया गर्ने दर्शक हुनुहुन्छ ।